Adult Dengue - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မိုးရာသီနဲ့အတူ သှေးလှနျတုပျကှေး သတိပေးခကျြမြားမြား ထှကျပျေါလာသလို အိမျရှိတဈစုံတဈယောကျ နမေကောငျးဖွဈလြှငျလညျး သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါဖွဈနမှော စိုးရိမျလာကွသညျ ။ ဒီဘကျပိုငျးမှာ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ ပိုမိုနာမညျကွီးလာသလို လူနာမြားဘကျမှလဲ ပိုမိုစိုးရိမျ ပူပနျလာကွသညျ ။ ထို့အပွငျ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါမှာ ခွငျမှတဆငျ့ ကူးစကျနိုငျတာကွောငျ့ ခွငျ နှိမျနငျးရေး ၊ ကာကှယျရေးတှကေို အလေးထားပွောဆိုလာကွပါတယျ ။
သှေးလှနျတုပျကှေး ဘာကွောငျ့ဖွဈလဲ ?
သှေးလှနျတုပျကှေးဟာ Arbo virus အုပျစုမှ ဒနျဂီးဗိုငျးရပျဈ ( dengue virus) ကွောငျ့ဖွဈစပေါတယျ ။ RNA Virus ဖွဈပွီး တုပျကှေး လက်ခာဏာနှငျ့ အတူ သှေးယိုစေ သှေးထှကျလှနျ စသေောကွောငျ့ သှေးလှနျတုပျကှေး ရောဂါလို့ ချေါပါတယျ။ အမြိုးအစားကှဲအားဖွငျ့ လေးမြိုးရှိပွီး အမြိုးအစားတဈမြိုးဖွဈဖူးရုံနဲ့ ထပျမဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ ။ သို့သျော နောကျတဈကွိမျ နောကျအမြိုးအစားတဈမြိုးဝငျလာပါက ပိုမိုပွငျးထနျတဲ့ သှေးလှနျတုပျကှေးကို ဖွဈစပေါတယျ ။
ဒီသှေးလှနျတုပျကှေးကို အဓိကသယျဆောငျတာကတော့ အဒေီးဈခွငျ အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ ။ အဖွူအမညျးကွားရှိပွီး အဓိက ဗိုငျးရပျစါကိုသယျဆောငျတာက ခွငျမဖွဈပါတယျ ။ ရကွေညျရသေနျ့တှမှော အဓိကပေါကျဖှားလရှေိ့ပွီး ဘုရားပနျးအိုး ၊ ရစေညျရခှေကျမြား ၊ ရတေငျကနျြနိုငျသညျ့ ဗူးခှံ ပုံးခှံအလှတျမြား တာယာဟောငျးမြားတှငျ ပေါကျဖှားကွပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ မနကျခငျးနဲ့ ညနတှေမှော ပိုမိုကိုကျလရှေိ့ပါတယျ ။
အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတျောတျောမြားမြားတှငျ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ ဖွဈပှားလရှေိ့ပွီး မှတျတမျးမြားအရ ငါးနှဈအရှယျမှ အသကျကွီးပိုငျးမြားအထိ ဖွဈပှားမှုတိုးလာကွောငျး သိရသညျ ။ အထူးသဖွငျ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျမြား လူကွီးမြားတှငျ တှငျ ဖွဈပှားသော သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါကို အထူးသတိပွုလာကွပွီး အလေးပေး ကာကှယျနကွေပါတယျ ။
ယခငျအခါမြားက အသကျ ၁၅ နှဈအောကျ ကလေးမြားတှငျသာ ဖွဈပှားလရှေိ့သညျဟု ယူဆခဲ့ကွရာမှ ယခုအခါ လူငယျလူလတျပိုငျးမြား လူကွီးမြားတှငျပါ ပိုပိုပွီး ဖွဈပှားလာကွောငျး တှရေ့သညျ ။
သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါဟာ ခနျ့မှနျးရခကျသော ရောဂါတဈခုထဲ အပါအဝငျဖွဈပါတယျ ။ အဆငျ့မြားအနနေဲ့
(၁) ရောဂါလက်ခဏာ ပွသမှု မရှိခွငျး
( ၂ ) ရိုးရိုးဒနျဂီး အဖြားရောဂါအမြားစုတှငျ သာမာနျတုပျကှေးရောဂါကဲ့သို့ ရုတျတရကျ အဖြားကွီးခွငျး ၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး ၊ ခွဆေဈလကျဆဈကိုကျခွငျး ၊ နထေိုငျမကောငျးခွငျး ၊ ပြို့ခငျြ အနျခငျြခွငျးမြားဖွဈပှားပွီး ပွနျကောငျးသှားခွငျး
( ၃ ) အထကျပါလက်ခဏာမြားနှငျ့အတူ သှေးယိုစီးမှု လက်ခဏာမြားရှိခွငျး
( ၄ ) သှေးလနျ့သောလက်ခဏာ ( dengue shock syndrome) ဖွဈပှားပွီး သဆေုံးသညျအထိဖွဈခွငျး
အထူးသဖွငျ့ သကျကွီးရှယျအိုမြားတှငျ နဂိုရောဂါအခံရှိသူမြားနှငျ့ အသကျအရှယျကွောငျ့ ကိုယျခံအား နညျးပါးနသေူမြားတှငျ ပိုမိုပွီး ရလာဒျဆိုးမြားထှကျပျေါလရှေိ့ပါတယျ ။
သှေးလှနျတုပျကှေး လက်ခဏာတှဟော တဈပတျလောကျကွာရငျ ပွနျလညျ ပြောကျကငျးသှားနိုငျပါတယျ ။ သို့သျော ရောဂါလက်ခဏာပွပွီး ၃ရကျမှ ၅ ရကျအတှငျးဟာ အရေးကွီးဆုံးကာလပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ထိုအခြိနျအတှငျး နှာခေါငျးသှေး သှားဖုံးသှေးယိုတာ ပိုဆိုးလာပါက ကျောဖီရောငျ သှေးအနျခွငျး ဝမျးမညျးမညျးမြားသှားခွငျး တို့ဖွဈလာပါက ရှော့ဝငျသညျ အထိဖွဈနိုငျပါတယျ ။ ထိုအဆငျ့အထိ ရောကျလာပါက အထူးဂရုစိုကျရနျ လိုအပျပွီး ဆေးရုံတကျရနျလိုအပျပါတယျ ။
ပွငျးထနျရောဂါအဆငျ့တှငျ အောကျပါ အခွအေနမြေားကို တှနေို့ငျပါတယျ ။
– သှေးရညျကွညျမြား ပွငျးထနျစှာ ယိုစီးခွငျး
– ကိုယျတှငျးအင်ျဂါမြား ပွငျးထနျစှာ ပကျြစီးခွငျး ဆိုးရှားပွငျးထနျတဲ့ သှေးလှနျတုပျကှေးအဆငျ့မြား မရောကျမှီ Warning signs လို့ချေါတဲ့ သတိပေးလက်ခဏာရပျမြားကို သိထားသငျ့ပါတယျ ။
– ဗိုကျ မခံမရပျနိုငျအောငျ နာလာခွငျး
– နှလုံးခုနျနှုနျး မွနျလာခွငျး
– ခွဖြေားလကျဖြားမြား အေးစကျ၍ ခြှေးစေးမြားပွနျလာခွငျး ဂဏာမငွိမျဖွဈခွငျး
– ကျောဖီရောငျမြား အနျခွငျး သှေးအနျခွငျး
– ဝမျးမညျးမညျး သှားခွငျး အစရှိသညျ့ အထကျပါ လက်ခဏာမြားဖွဈပှားပါက ဆေးရုံသို့အလငျြအမွနျပို့ရနျ လိုအပျပါသညျ ။
လူကွီးသှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါတှငျ သှေးယိုစီးမှု လက်ခဏာမြားအဖွဈ အနီစကျမြားထှကျခွငျး ၊ နှာခေါငျးသှေးယိုစီးခွငျး ၊ ရာသီသှေး အလှနျအမငျး ဆငျးခွငျးတို့ အတှမြေ့ားသျောလညျး အမြားဆုံးတှရေ့သညျမှာ အစာအိမျသှေးယိုစီးမှုပငျဖွဈသညျ ။
ထို့အတူ အသညျးထိခိုကျခွငျးမြား ရှိနိုငျပွီး ထို့အတှကျ လူကွီးမြားတှငျ နာတာရှညျ အသညျးရောငျရောဂါ ရှိသူမြား ၊ အရကျကွောငျ့ အသညျးခွောကျသူမြားတှငျ အသညျးပိုမိုပကျြစီးလရှေိ့ပါတယျ ။ ဦးနှောကျကို ထိခိုကျပါက သတိလဈခွငျး လက်ခဏာမြား တှရေ့ပါတယျ ။
လူကွီးသှေးလှနျတုပျကှေးတှငျ အမြားဆုံးတှလေ့ရှေိ့သော ပုံမှနျမဟုတျသညျ့ လက်ခဏာမြားအနဖွေငျ့ ကိုယျတှငျးသှေး ယိုစီးမှုမြားပွားခွငျး ၊ နှလုံးကွီးခွငျး ၊ နှလုံးခုနျ မူမမှနျခွငျး ၊ ARDS ကဲ့သို့အသကျရှူလမျးကွောငျးရောဂါမြား ဖွဈပှားခွငျး ၊ ပနျကရိယရောငျခွငျး ၊ အူအတကျရောငျခွငျး ၊ အာရုံကွောဆိုငျရာ လက်ခဏာမြားဖွဈသော တကျခွငျး ၊ ကိုမာဝငျခွငျးမြားအထိ တှနေို့ငျပါတယျ ။
ထို့အတှကျ သှေးလှနျတုပျကှေးရေးတှငျ ခွငျမကိုကျခံရဖို့ရော ခွငျနှိမျနငျးရေး နှဈမြိုးလုံး အရေးကွီးပါတယျ ။
။နခေ့ငျးဘကျ အိပျစဉျ ခွငျမကိုကျခံရစရေနျ သတိပွုပါ ။
။လိုအပျပါက ခွငျထောငျ ၊ ခွငျမကိုကျသညျ့လိမျးဆေးမြား အသုံးပွုပါ ။
။ ပနျးအိုး ၊ ဘုရားအိုးမြား နစေ့ဉျ လဲလှယျပါ ။
။ ဘူးခှံ ၊ ပုံးခှံ ၊ တာယာဟောငျးမြားတှငျ ခွငျမပေါကျဖှားစရေနျ သတိထားပါ ။
။ ခွငျခိုအောငျးနိုငျသော နရောမြားကို သခြောရှငျးလငျးပါ ။
။ ဖုံး ၊သှနျ ၊လဲ ၊ စဈ လုပျဆောငျခွငျးက ခွငျမပေါကျဖှားအောငျ လုပျဆောငျပေးပါတယျ ။
မိုးရာသီနဲ့အတူ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သတိပေးချက်များများ ထွက်ပေါ်လာသလို အိမ်ရှိတစ်စုံတစ်ယောက် နေမကောင်းဖြစ်လျှင်လည်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်နေမှာ စိုးရိမ်လာကြသည် ။ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ပိုမိုနာမည်ကြီးလာသလို လူနာများဘက်မှလဲ ပိုမိုစိုးရိမ် ပူပန်လာကြသည် ။ ထို့အပြင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါမှာ ခြင်မှတဆင့် ကူးစက်နိုင်တာကြောင့် ခြင် နှိမ်နင်းရေး ၊ ကာကွယ်ရေးတွေကို အလေးထားပြောဆိုလာကြပါတယ် ။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ ?
သွေးလွန်တုပ်ကွေးဟာ Arbo virus အုပ်စုမှ ဒန်ဂီးဗိုင်းရပ်စ် ( dengue virus) ကြောင့်ဖြစ်စေပါတယ် ။ RNA Virus ဖြစ်ပြီး တုပ်ကွေး လက္ခာဏာနှင့် အတူ သွေးယိုစေ သွေးထွက်လွန် စေသောကြောင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားကွဲအားဖြင့် လေးမျိုးရှိပြီး အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ဖူးရုံနဲ့ ထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ သို့သော် နောက်တစ်ကြိမ် နောက်အမျိုးအစားတစ်မျိုးဝင်လာပါက ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကို ဖြစ်စေပါတယ် ။
ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးကို အဓိကသယ်ဆောင်တာကတော့ အေဒီးစ်ခြင် အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် ။ အဖြူအမည်းကြားရှိပြီး အဓိက ဗိုင်းရပ်စါကိုသယ်ဆောင်တာက ခြင်မဖြစ်ပါတယ် ။ ရေကြည်ရေသန့်တွေမှာ အဓိကပေါက်ဖွားလေ့ရှိပြီး ဘုရားပန်းအိုး ၊ ရေစည်ရေခွက်များ ၊ ရေတင်ကျန်နိုင်သည့် ဗူးခွံ ပုံးခွံအလွတ်များ တာယာဟောင်းများတွင် ပေါက်ဖွားကြပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် မနက်ခင်းနဲ့ ညနေတွေမှာ ပိုမိုကိုက်လေ့ရှိပါတယ် ။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး မှတ်တမ်းများအရ ငါးနှစ်အရွယ်မှ အသက်ကြီးပိုင်းများအထိ ဖြစ်ပွားမှုတိုးလာကြောင်း သိရသည် ။ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ လူကြီးများတွင် တွင် ဖြစ်ပွားသော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို အထူးသတိပြုလာကြပြီး အလေးပေး ကာကွယ်နေကြပါတယ် ။
ယခင်အခါများက အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကလေးများတွင်သာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ဟု ယူဆခဲ့ကြရာမှ ယခုအခါ လူငယ်လူလတ်ပိုင်းများ လူကြီးများတွင်ပါ ပိုပိုပြီး ဖြစ်ပွားလာကြောင်း တွေ့ရသည် ။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ ခန့်မှန်းရခက်သော ရောဂါတစ်ခုထဲ အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ။ အဆင့်များအနေနဲ့
(၁) ရောဂါလက္ခဏာ ပြသမှု မရှိခြင်း
( ၂ ) ရိုးရိုးဒန်ဂီး အဖျားရောဂါအများစုတွင် သာမာန်တုပ်ကွေးရောဂါကဲ့သို့ ရုတ်တရက် အဖျားကြီးခြင်း ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ ခြေဆစ်လက်ဆစ်ကိုက်ခြင်း ၊ နေထိုင်မကောင်းခြင်း ၊ ပျို့ချင် အန်ချင်ခြင်းများဖြစ်ပွားပြီး ပြန်ကောင်းသွားခြင်း
( ၃ ) အထက်ပါလက္ခဏာများနှင့်အတူ သွေးယိုစီးမှု လက္ခဏာများရှိခြင်း
( ၄ ) သွေးလန့်သောလက္ခဏာ ( dengue shock syndrome) ဖြစ်ပွားပြီး သေဆုံးသည်အထိဖြစ်ခြင်း
အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် နဂိုရောဂါအခံရှိသူများနှင့် အသက်အရွယ်ကြောင့် ကိုယ်ခံအား နည်းပါးနေသူများတွင် ပိုမိုပြီး ရလာဒ်ဆိုးများထွက်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ် ။
သွေးလွန်တုပ်ကွေး လက္ခဏာတွေဟာ တစ်ပတ်လောက်ကြာရင် ပြန်လည် ပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ် ။ သို့သော် ရောဂါလက္ခဏာပြပြီး ၃ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်းဟာ အရေးကြီးဆုံးကာလပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထိုအချိန်အတွင်း နှာခေါင်းသွေး သွားဖုံးသွေးယိုတာ ပိုဆိုးလာပါက ကော်ဖီရောင် သွေးအန်ခြင်း ဝမ်းမည်းမည်းများသွားခြင်း တို့ဖြစ်လာပါက ရှော့ဝင်သည် အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ထိုအဆင့်အထိ ရောက်လာပါက အထူးဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ပြီး ဆေးရုံတက်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ။
ပြင်းထန်ရောဂါအဆင့်တွင် အောက်ပါ အခြေအနေများကို တွေ့နိုင်ပါတယ် ။
– သွေးရည်ကြည်များ ပြင်းထန်စွာ ယိုစီးခြင်း
– ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးခြင်း ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးအဆင့်များ မရောက်မှီ Warning signs လို့ခေါ်တဲ့ သတိပေးလက္ခဏာရပ်များကို သိထားသင့်ပါတယ် ။
– ဗိုက် မခံမရပ်နိုင်အောင် နာလာခြင်း
– နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်လာခြင်း
– ခြေဖျားလက်ဖျားများ အေးစက်၍ ချွေးစေးများပြန်လာခြင်း ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း
– ကော်ဖီရောင်များ အန်ခြင်း သွေးအန်ခြင်း
– ဝမ်းမည်းမည်း သွားခြင်း အစရှိသည့် အထက်ပါ လက္ခဏာများဖြစ်ပွားပါက ဆေးရုံသို့အလျင်အမြန်ပို့ရန် လိုအပ်ပါသည် ။
လူကြီးသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတွင် သွေးယိုစီးမှု လက္ခဏာများအဖြစ် အနီစက်များထွက်ခြင်း ၊ နှာခေါင်းသွေးယိုစီးခြင်း ၊ ရာသီသွေး အလွန်အမင်း ဆင်းခြင်းတို့ အတွေ့များသော်လည်း အများဆုံးတွေ့ရသည်မှာ အစာအိမ်သွေးယိုစီးမှုပင်ဖြစ်သည် ။
ထို့အတူ အသည်းထိခိုက်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပြီး ထို့အတွက် လူကြီးများတွင် နာတာရှည် အသည်းရောင်ရောဂါ ရှိသူများ ၊ အရက်ကြောင့် အသည်းခြောက်သူများတွင် အသည်းပိုမိုပျက်စီးလေ့ရှိပါတယ် ။ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်ပါက သတိလစ်ခြင်း လက္ခဏာများ တွေ့ရပါတယ် ။
လူကြီးသွေးလွန်တုပ်ကွေးတွင် အများဆုံးတွေ့လေ့ရှိသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့် လက္ခဏာများအနေဖြင့် ကိုယ်တွင်းသွေး ယိုစီးမှုများပြားခြင်း ၊ နှလုံးကြီးခြင်း ၊ နှလုံးခုန် မူမမှန်ခြင်း ၊ ARDS ကဲ့သို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်း ၊ ပန်ကရိယရောင်ခြင်း ၊ အူအတက်ရောင်ခြင်း ၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာ လက္ခဏာများဖြစ်သော တက်ခြင်း ၊ ကိုမာဝင်ခြင်းများအထိ တွေ့နိုင်ပါတယ် ။
ထို့အတွက် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရေးတွင် ခြင်မကိုက်ခံရဖို့ရော ခြင်နှိမ်နင်းရေး နှစ်မျိုးလုံး အရေးကြီးပါတယ် ။
။နေ့ခင်းဘက် အိပ်စဉ် ခြင်မကိုက်ခံရစေရန် သတိပြုပါ ။
။လိုအပ်ပါက ခြင်ထောင် ၊ ခြင်မကိုက်သည့်လိမ်းဆေးများ အသုံးပြုပါ ။
။ ပန်းအိုး ၊ ဘုရားအိုးများ နေ့စဉ် လဲလှယ်ပါ ။
။ ဘူးခွံ ၊ ပုံးခွံ ၊ တာယာဟောင်းများတွင် ခြင်မပေါက်ဖွားစေရန် သတိထားပါ ။
။ ခြင်ခိုအောင်းနိုင်သော နေရာများကို သေချာရှင်းလင်းပါ ။
။ ဖုံး ၊သွန် ၊လဲ ၊ စစ် လုပ်ဆောင်ခြင်းက ခြင်မပေါက်ဖွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် ။